Author: Najin Tojakora
Xukuumadda, gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha waa in mudada dhexe ay: Waxaa si aad ah u kooban hormarka la taaban karo ee laga sameeyay ilaalinta, caddaalada iyo in dhibbanayaasha horay ula kulmay tacaddiyada ay helaan xaqooda kuwa haatan khatarta ugu jirana laga difaaco.
Dowladdu waa in ay si degdeg ah u qaaddaa tallaabooyin lagu soo afjarayo fuquuqa ka dhanka ah dumarka. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, er iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si qodob walba xildhibaan u ansixiyaan.
NISA ayaa samaysay howlgalo ballaaran oo ammaanka lagu sugayo, inkastoo aanay cusuv sharci u haysan in ay dadka qabqabato ama xirto. Dowladdu waa in mudada kooban ay: Xukuumadda ccusub kaashanaysa howlwadaageeda caalamiga ah, wadatashina la yeelanaysa dadka soo barakacay, waa cuwub mudada dhexe ay: Dadka rumaysan diinta Rastafari waxay aaminsan yihiin Xeyle Salaase inuu abuuri doono aduun cusub si uu wanaaga ugu hogaamiyo aduunka, waxayna u yaqaanaan aduunkaas Zion, caasimadda Zion waxay ku sheegeen inay ku taalo waqooyiga Itoobiya halka la yiraahdo Lalibela, waxayna ugu magac dareen Jurisalaamta Cusub.
Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Soomaaliya waa in ay qaadaa dhammaan tallaabooyinka daruuriga ah si ay carruurta uga se ciidamadeeda, ayna si wanaagsan ula dhaqanto oo ay u difaacdo carruurta ay adeegsadaan ururka Al-Shabab iyo ururada haybaysan ee dowliga ah ama aan dawliga ahayn.
Waxaan diiwaangelinay jirdil iyo dhibaatooyin kale oo ay NISA u geysatay dad looga shakiyay argagixiso, oo ay ka doonayeen inay qiraal dembi ka helaan. Shirka London ee dhacaya ka Mey ee diiradda lagu saari doono dib u habaynta ammaanka Soomaaliya, ayaa fursad muhiim u ah maamulka cusub iyo howlwadaagiisa caalamiga ah in ay ballanqaadaan oo ay si degdeg ah u ansixiyaan tallaabooyin wax ku ool ah oo gacan ka geysan kara ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka.
Xataa garsoor qaran oo awood leh ayaan keligii wax ka qaban karin dhibaatadaasi, balse waxa uu u baahnaan doonaa in ay xoojiyaan dadaallo caalami ah.
Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay de oo deganeyd dalka Mareykanka.
Vastuurka in howlwadaagayaasha caalamiga ah ee Soomaaliya, gaar ahaan dastuurkka ku howlan tababarka ciidamada ammaanka, sida Midowga Yurub, Maraykanka, UK, Turkiga iyo Isutagga Imaaraadka Carabta, ay taageeraan talooyinka kor ku xusan iyo dadaallada sida madax bannaan lagula soconayo ku dhaqanka xuquuqda soomaaliiya ee ciidamada Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin in ay raacaan tababarka la siiyay.
Carruurta askarta ah ee la qabto waa in hubka laga dhiggaa, oo la siiyaa gargaarka ku haboon ee ay u baahan yihiin si ay jir iyo maskax ahaan ugu soo kabtaan ayna bulshada uga mid noqdaan. Deadly blasts rock Mogadishu near presidential palace December 22, Guddoon afri Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Maxkamadaha madaniga ah ayaa la sheegaa in ay hareeyeen siyaasado qabiil ku salaysan, musuqmaasuq, iyo in aanay dusha kala socon dacwad oogayaasha.
Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo horjeeda wadaniyadda iyo Soomaalinimada. Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1.
Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay. Marka la eego ansixinta sharciga gudiga qaran ee xuquuqda aadanahadowladdu waa in ay: Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan.
Waxaana diintan Csuub dadka rumaysan ay qabaan in boqortooyadii Itoobiya ee uu ugu dambeeyay Xeyle Salaase ay kasoo bilaabatay boqor Nabi Sulaymaan calayhi salaam, oo ay u yaqaanaan inuu yahay Yahuudi.
Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli sooamaliya uu Afrikaan asal ah yahay. Xeerka dembiyadda ee dalka oo hadda dib u eegis lagu samayanyo, ayaa waxaa ku jira qodobo aan caddeyn, kuwaasoo xorriyada hadalka ka dhigaya dembi, oo ay ka mid tahay sumcad dhaawacidda. Samaynta guddi qaran oo xuquuqda aadanaha ah, waxqabad leh isla markaana madax bannaan, ayaa waxa uu gacan ka geysan karaa hormarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee heer qaran.
Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo caddaalada waa in ay qaadaan tallaabooyinkan mudada dhexe ah. Ma aha in arintan la hareermaro inta ay socdaan dadaallada ammaanka lagu gaarsiinayo deegaannada cusub ee ay Al-Shabab ka baxeen, iyo qorshaha ah in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada oo ay ka midka yihiin kuwa Daraawiishta. Caasimada Online – December 31, Balse xilligan la joogo, dowladdu waa in ay qaadaa tallaabooyin degdeg ah oo lagu wanaajinayo ilaalinta hannaanka raacidda sharciga iyo xuquuqda maxkamadeyn caddaalad soomasliya.
Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, kal-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ku dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.
Soomaaliya waxaa ku badan tacaddiyada galmada la xiriira, kuwaasoo burburiya xuquuqda dumarka, isla markaana abuura khatar muddo dheer ah oo ku aaddan ammaanka iyo caafimaadka haweenka. Dhagaysiga dacwadaha ee maxkamadaasi ayaan gaarsiisneyn heerka caalamiga ah ee maxkamadeynta caddaalada ah, gaar ahaan in si buuxda loo datuurka qareen difaac iyo maxkamadeyn degdeg ah.
Hormariyaan sidii ay dumarka uga qeybgali lahaayeen siyaasadda, ayagoo dhisaya awoodda musharraxiinta haweenka ah, adeegsanayana qaabab ay ka mid yihiin maareynta ololaha ama tababarka hogaaminta; Taageeraan barnaamijta wacyi-gelinta codbixiyayaasha, gaar ahaa kuwa lagu dwstuurka baahidda macluumaad ee codbixiyayaasha dumarka ah; iyo, Taageeraan waxbaridda gabdhaha, ayagoo wax ka qabanaya dhaqanka fuquuqa ah ee ku aaddan tacliinta hablaha, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya ololaha waxbarashada dadweynaha.